XOG: ‘Khilaaf cusub oo ka dhex Curtay madaxda Al-Shabab iyo xubno talada ka go’do oo la dal dalay | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA XOG: ‘Khilaaf cusub oo ka dhex Curtay madaxda Al-Shabab iyo xubno talada...
XOG: ‘Khilaaf cusub oo ka dhex Curtay madaxda Al-Shabab iyo xubno talada ka go’do oo la dal dalay
Warbaahinta Kenya ayaa mar kale warisay in uu muran soo kala dhex galay hogaanka sare ee Al-Shabaab taasi oo keentay in dagaalamaashu ay isku dhacaan, taasi oo faa’iido u ah Dowladaha dagaalka kula jira Al-Shabaab.
Kala qaybsanaanta ayaa waxaa ay keentay in la dal-dalo xubno ka tirsan Golaha Shuuradda.
Sida uu daabacay Wargeyska Daily Nation, Sirdoonka Kenya ayaa todobaadkaan sheegay in dagaalamaasha Al-Shabaab ay la kala Safteen hogaanku uu khilaafku u dhexeeyo.
“Natiijadii waxaa ay noqotay in ay dagaalamayaashu isdhiibaan. Dalalkuna waxaa ay dagaalamayaasha soo noqonaya kusoo jiiteen cafis iyo dhaqaale, taasi oo caawisay dagaalka Argagixisadda lagu la jiro” ayuu Wargeysku kasoo xigtay sarkaal sirdoonka ka tirsan.
Bishii lasoo dhaafay ayaa Warbaahinta Kenya waxaa ay sheegeen in Weerar diyaaradeed oo ka dhacay Degmadda Bu’aale ee Gobolka jubadda Dhexe lagu dilay Axmed Iimaan Cali oo ahaa Madaxa Al-Shabaab ee Kenya.
Wargeysku waxaa uu sheegay in Muranka u dhexeeya Al-Shabaab uu kordhiyay xubnahooda isi soo dhiibaya waxaana uu tusaale u soo qaatay Sarkaal heerkiisu sareeyo oo ciidanka Soomaaliya isu soo dhiibay kaasi oo wargeysku uu magaciisa ku sheegay Cabdi Xaaji.
“Dagaalamayaashu hadda waa ay iska soo horjeesteen, taasna waxaa sababay markii Abuu Cabeyda uu diiday in uu is casilo xitaa isagoo xanuunsanaya” ayuu Wargeysku kasoo xigtay Cabdi Xaaji.
Al-Shabaab waxaa ay sidoo kale ciqaabaan dagaalamayaasha kasoo jeeda Kenya kuwaas oo ay rumeeysanyihiin in ay basaasyihiiin ama ay doonayaan in ay ugoostaan Daacish.
2-dii April Sanadkii 2018 Al-Shabaab ayaa tuuladda Buqa-qable ee Gobolka Hiiraan ku dilay Maxamed Yuusuf Xasan iyo Maxamed Nuur Abdi oo Kenya kasoo jeeda waxayna ku eedeyeen in ay xiriir la lahaayeen Ciidanka Dowladda faderalka ah iyo kuwa Midowga Africa.
Daily Nation ayaa sidoo kale waxaa uu sheegay in hadda ay Al-Shabaab badi goobayaan Taliye Kenyan ah kaasi oo la waayay kadib markii loo xilsaaray in uu howl gallo ka fuliyo xuduudda Soomaaliya iyo Kenya.
Kaso koow khilaafka dhexdooda ah Al-Shabaab ayaa sidoo kale waxaa ay wajahayaan weeradda Cirka ah ee Mareykanku horseedka ka yahay iyo Ciidanka gaarka ah ee Soomaaliya oo xilliyadda qaar u dhaca xeryaha Al-Shabaab.